Hospital-PVC ụlọ ngwa imewe atụmatụ-News-Topflor China ejedebeghị
Echiche:9 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-06-01 Mmalite: Saịtị
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọgwụ emeela ka ndị mmadụ nwee echiche ọhụụ maka ụlọ ọgwụ mba ụwa ọhụrụ, yana arụmọrụ nke ihe eji achọ ụlọ mma abụrụla ihe kachasị mkpa. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ala ụlọ PVC apụtawo n'etiti ọtụtụ ihe ala, ma jiri nwayọọ nwayọọ bụrụ nhọrọ mbụ maka ọrụ ụlọ ọgwụ ọhụrụ na mmezigharị nke ụlọ ochie. Karịsịa maka ọchịchọ nke ụlọ ọgwụ maka nchịkwa ọrịa, ịdị ọcha na-abụkarị ihe mbụ. Nke abuo, ihe achọrọ maka nchekwa na nhicha dị mfe dịkwa elu.
Plasticlọ plastik PVC jupụtara na agba, ị nwere ike iji ntụpọ, usoro na atụmatụ ndị ọzọ iji mee ka agba dị iche iche. Nkọkọta ụcha mara mma nke ala plastik na mpaghara ọrụ ụmụaka na-ewepụ ụjọ ụmụaka maka ụlọ ọgwụ, na-ebelata nrụgide na ọgwụgwọ ahụike, ma nwee ike ịkwado ọgwụgwọ.
Enweghị oghere dị n'elu ala pvc plastik, unyi enweghị ike ịbanye na oyi akwa dị n'ime. Enweghị formaldehyde, enweghị radieshon, na ihe ndị e wuru na antibacterial nwere ike inye nsị na ọgwụgwọ antibacterial na-adịgide adịgide, na-egbochi microorganisms ịba ụba n'ime na n'èzí. Njikọ na-enweghị ntụpọ na-egbo mkpa nke nọọsụ ọdụ maka mgbochi mmiri, uzuzu uzuzu, dị ọcha na ịdị ọcha.
Nnabata ụlọ ọgwụ
Plasticlọ plastik pvc nwere ihe pụrụ iche dị n'ime, nke nwere ike ịgbasa nrụgide na-eje ije ma nwee mmetụta nkwụsịtụ ujo. Ọ dị mma ịzọ ụkwụ, na-ebelata ihe mgbu nke ịkpụ na igbochi abrasions kpatara. O kwesịrị nke ọma maka mpaghara nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ ma na-esi na ebe obibi ụlọ ọgwụ.
Corlọ ụlọ ọgwụ
The mgbochi ileghara ọrụ nke ịkwanyere plastic n'ala bụ nnọọ pụtara ìhè. Tụkwasị na nke ahụ, njirimara mgbochi nke ala plastik bụ na ọ na-akpọnwụ mgbe ekpughere ya na mmiri, nke na-ebelata ihe dị mma nke onye ọrịa ịdaba n'ihi ọgwụ ahụ onye ọrịa na-adịghị ngwa ngwa na nọọsụ na-agba ọsọ na-agba. ụlọ paseeji ụlọ ọgwụ.